फोनिज प्रदेश १ को प्रथम भेला तेह्रथुमको छथरमा हुने । - Nayabulanda.com
४ फाल्गुन २०७६, आईतवार १६:१३ 288 पटक हेरिएको
नेपाल आदिबासी जनजाती पत्रकार महासंघ फोनिज प्रदेश नं. १ कार्य समितीको प्रथम भेला फागुन ८ र ९ गते तेह्रथुमको छथर शुक्रबारेमा हुने भएको छ । प्रदेश अधिबेशन पछि बिभिन्न महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्दै आएको प्रदेश समितीको पछिल्लो बैठकले छथर गाउपालिकाको शुक्रबारेमा ऐतिहासिक प्रथम भेला गर्न लागेको हो । भेलाको मिती नजिकिएसंगै तयारीलाई समेत तिव्र पारिएको फोनिज प्रदेश नं. १ कार्य समितीका महासचिव विदुर खवासले जानकारी दिनुभयो । उहाका अनुसार दुईदिनसम्म चल्ने भेलामा १४ जिल्लाका करिब एकसय पत्रकारहरु सहभागी हुनेछन् ।
फोनिज प्रदेश कमिटीको निर्णय अनुसार फागुन ८ गते कार्यक्रम उद्ध्घाटन तथा प्रगतीको समिक्षा तथा भावी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल हुनेछ भने ९ गते छथर गाउपालिका क्षेत्रका ऐतिहासिक तथा पर्यटकिय स्थलहरुको अनुगमन,भ्रमण,अध्ययन तथा प्रचार प्रचार गरिने भएको छ । भ्रमण टोलीमा गाउपालिका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत,प्रबक्ता,वडाध्यक्ष तथा जनप्रनिधि सहित करिब एकसयजना पत्रकारहरु सहभागी हुने छन् ।
छथरको पर्यटकिय स्थलहरुमा चाङलुङ गुफा,सौरेनी डाडा,साततले धाम,तक्मीनाक्ला,मार्गपोखरी,ताक्लुङ यक,थाक्चोलुङ तोपा माङहिम लगायत रहेका छन् । फोनिजको भेला तथा भ्रमणले छथर गाउपालिकाको पर्यटन प्रर्बद्धनमा टेवा पुग्ने आशा रहेको गाउपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुले बतउनुभयो ।